Isitrayikhi 1.Quick & kwakhona elula & Easy slag-ukususwa
Ukusebenza kwe-arc ezinzileyo kunye nokuphazamiseka okuncinci
Imbonakalo 3.Smooth kunye shiny & iipropati ezibalaseleyo ngomatshini
4. Ukusebenza okuphezulu kunye nexabiso eliphezulu kwi-30c.
5. Amanqanaba okuphumelela aphezulu
6. Ukuxhathisa ngokukuko kunye nokusebenza kwe-x-ray
7. Ukupakisha: 300kgs damproof ibhegi ukuphakheja; okanye njengoko kufuneka
I-1.Electrode kufuneka ivunywe nge-350-380 ℃ ngeyure e-1 ngaphambi kokuwelda, yome i-electrode xa uyisebenzisa.
3.Ufanele usebenzise i-arc emfutshane, i-swings ayifanele ibe nkulu kakhulu, i-bead welding efanelekileyo.
Izinto TiO2 AL2O3 SiO2 Mnu CaO + MgO Izinto eziphilayo Okunye
Iziphumo ezizizo 42 4.5 28 9 10.5 4 2
I-welding electorde powder ye-E7018, i-E6011, i-E6010, i-E7024, njl. Pls uqhakamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Inkqubo yeemfuno zobugcisa:
Iindawo ezibalulekileyo zentsimbi kufuneka ziphawulwe ngokucacileyo ngokuhambelana nemigaqo efanelekileyo xa kulungiswa iinkqubo zentsimbi.
Ukudibanisa ukungunda (indibano yemidlalo) yamalungu e-welding, isixa se-welding shrinkage kufuneka sithathelwe ingqalelo. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba ukunyamezelana kwamalungu e-welding kuphakathi kweemfuno zoyilo.
Ngaphambi kokudibana, susa umhlwa, i-oyile, uthuli kunye nokufuma ngaphakathi kwe-25mm kumacala omabini e-weld. Kwii-welds ezibalulekileyo zesinyithi esine-alloy yentsimbi, isikali se-oxide kufuneka sisuswe.
Isithuba sendibano kufuneka silawulwe ngexesha lendibano. Isikhewu se-butt welds yi-2 ~ 3mm, kwaye isithuba se-fillet welds yi-0 ~ 2mm. Xa isithuba sendawo sikhulu kakhulu, zama ukunciphisa isayizi esichaziweyo. Akuvunyelwe ngokungqongqo ukongeza iifilgi kwisikhewu, kwaye ukubhangqwa okuqinileyo akuvumelekanga ukunciphisa uxinzelelo olushiyekileyo kwizinto ezi-welding.
Izinto zokuwelda kunye nenkqubo yeparamitha esetyenzisiweyo kwindibano yokuwelda iya kufana neemfuno zentsimbi esesikweni.
Imisebenzi ye-Welding inokwenziwa kuphela emva kokuba iinxalenye ze-welding zidlulile ukuhlolwa kwendibano.
Kwizixhobo ezitsha kunye neenkqubo ezintsha, iimvavanyo zenkqubo kufuneka zenziwe kwaye zinokusetyenziswa kuphela emva kokuba befanelekile.
I-slag ye-welding kunye neziphene kwingcambu ye-weld kufuneka zisuswe ngaphambi kokufakela i-weld weld ye-weld kunye nezinye i-welding welding.
I-Welding inokwenziwa kuphela emva kokucoca.
Phambi kwentsimbi, akuvumelekanga ukuqala ukutshaya kwe-arc kunye nokuvavanya uhlengahlengiso lwangoku kwindawo engeyo-welding. Emva kwentsimbi, umphezulu we-weld kufuneka ucocwe kwaye womiswe.
Inethi, kwiindawo ezibalulekileyo ze-welding zamalungu abalulekileyo e-welding, uphawu lwe-welder kufuneka luphawulwe kwindawo efanelekileyo emva kokuwelda.
Kwiipleyiti zentsimbi ezinobunzima be-0.3 ~ 4mm, iindlela zokuwelda ezinje ngerhasi yentsimbi okanye iargon tungsten arc welding zisetyenziswa ikakhulu.
Ukulungiselela ukuwelda izinto ezingafaniyo zentsimbi, kufuneka kukhethwe ii-electrode, iingcingo kunye neeflux zenqanaba elifanayo lamandla.
Xa i-welding i-alloy-alloy yensimbi eyakhiweyo, ayicetyiswa ukuba ime embindini, kwaye uzame ukugqibezela i-welding ngexesha elinye; Ngexesha le-multi-layer welding, amalunga phakathi kwamanqanaba kufuneka agxadazelwe kwaye iqondo lobushushu phakathi kwamanqanaba kufuneka lilawulwe phakathi kwama-250 ~ 300 ℃. Ngaphambi kokufaka umaleko olandelayo we-welding seam, kufuneka icocwe. Khangela i-welding ye-layer ephezulu ukuqinisekisa ukuba akukho ziphene.
Egqithileyo Ukujongana neWelding Rod D608
Okulandelayo: I-Electrode ye-Weld yentsimbi ye-Weld e-WS E6010